Imandarmedia.com.np: दशैंमा मुखै रसाउने चुकाउनी खान मन छ ? यसरी बनाउनूहोस्
Lifestyle, Main News » दशैंमा मुखै रसाउने चुकाउनी खान मन छ ? यसरी बनाउनूहोस्
दशैंमा मुखै रसाउने चुकाउनी खान मन छ ? यसरी बनाउनूहोस्
विदेशसम्मै पुगे पनि नेपालभर भने चुकाउनीको स्वाद फैलिन भ्याएको छैन। कतिले नाम सुनेका मात्र छन्, स्वाद चाखेका छैनन् । कतिले यसलाई ‘पाल्पाली अचार’ का नाममा मात्र चिन्छन्। पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मीतिरबाट बसाइँ सरेर विभिन्न क्षेत्र पुगेकाहरूले चिनजान–नातागोतालाई चखाएसँगै चुकाउनीको स्वाद फैलिएको हो। पछिल्लो समय बढेको आन्तरिक पर्यटनले यसको स्वाद धेरैको जिब्रोमा अडेको छ।